We.com.mm - Hongmeng OS ဟာ အမေရိက နဲ့ Google အတွက် အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုလေလား ?
Hongmeng OS ဟာ အမေရိက နဲ့ Google အတွက် အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုလေလား ?
Hongmeng ဟာ အမေရိက ကို တကယ်ပဲခြောက်လှန့်တော့မယ့် အိပ်မက်ဆိုးကြီးတစ်ခုပဲလားဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ရတော့မယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါပြီ။
Huawei ရဲ့ smartphone operating system ဖြစ်တဲ့ Hongmeng OS စမ်းသပ်မှုမှာ Xiaomi, Oppo အပြင် တရုတ်ဖျော်ဖြေရေး ဝက်ဘ်ဆိုဒ် နဲ့ app တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Tencent တို့ပါ ပါဝင်လာတယ်။ ဒီအကြောင်းကို Global Times မှာ သတင်းတစ်ပုဒ်အဖြစ်ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပြီး အဲဒီလို နည်းညာစွမ်းအားစုတွေစုပေါင်းပြီး Hongmeng OS စတင်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းမှုဟာ ကမ္ဘာ့နည်းပညာကဏ္ဍရဲ့ ဦးဆောင်သူ အမေရိက အတွက် ကြီးမားတဲ့ ထိုးနှက်မှုတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ဆိုတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့ကလည်း Huawei ဟာ ကိုယ်ပိုင် OS ဖြစ်တဲ့ Hongmeng အသုံးပြုထားတဲ့ Huawei Device ပေါင်း တစ်သန်း ( 1 Million ) ကို ဈေးကွက်ထဲ တင်ပို့မယ်လို့ဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ Hongmeng OS ကို Huawei Device တွေမှာတင်မဟုတ်ပဲ Oppo, Xiaomi စတဲ့ ဖုန်းတွေမှာပါ အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်တယ်လို့ Forbes နဲ့ Global Times က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
Hongmeng OS က အခုဆို လည်ပတ်ဖို့အရှိန်ယူနေတာဖြစ်ပြီး တကယ်လို့ Oppo, Xiaomi အပြင် တခြားနာမည်ကြီးဖုန်းတွေပါ Hongmeng OS အသုံးပြုနိုင်ဖို့ Huawei နဲ့ပူးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး Google အနေနဲ့ နစ်နာမှုတွေကို စတင်ကြုံတွေ့ရပါမယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ Google Service သုံးနေတဲ့ Huawei User ပေါင်း သန်း ၄၀၀ လောက်ရှိတာဖြစ်လို့ နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀ လောက်ကို Google အနေနဲ့ ဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ ခန့်မှန်းချက်က ဖြစ်မလာဘူးလို့ပြောမရတော့ပါဘူး။ နောက်ပြီး Hongmeng OS ဟာ Android နဲ့ IOS ထက် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပိုပြီး မြန်ဆန်မှုရှိတယ်လို့ Huawei ဘက်က ပြောထားပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ Google အနေနဲ့ ပထမချမှတ်ထားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်နေတာဖြစ်ပြီး Huawei ကို lifting ရက်ပေါင်း ၉၀ အချိန်ပေးထားပါတယ်။ ဆက်ပြီး ပူးပေါင်းမလား၊ ဒါမှမဟုတ် သမ္မတထရန့်ပ်ရဲ့ အမိန့်အတိုင်းလိုက်နာမလားဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ ဒီအတော်အတွင်းမှာပဲ Huawei ဘက်က Oppo, Xiaomi နဲ့ Tencent တို့က Hongmeng Release အတွက် ပူးပေါင်းလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ တရုတ်ဖုန်းတွေသာ Huawei နဲ့ပူးပေါင်းခဲ့မယ်ဆိုရင် Google Android ရဲ့ မိတ်ဖက်တွေက Samsung အပြင် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကျန်တော့မှာပါ။ နောက်ထပ်လည်း China Brand Mobile ဖုန်းတော်တော်များများ Huawei နဲ့ပူးပေါင်းဖို့ရှိနိုင်သေးတယ်လို့ မျှော်လင့်ရတဲ့အတွက် Hongmeng သာ တကယ်လို့အောင်မြင်လာခဲ့ရင် Google အနေနဲ့ မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီတော်တော်များများ နဲ့ နှစ်စဉ်ဝင်ငွေထဲက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လက်လွှတ်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။
ဈေးကွက်ထဲ Instock ရှိနေသေးတဲ့ device တွေအပြင် user တွေလက်ထဲရှိနေတဲ့ Device တွေမှာပါ Google Service တွေဖြစ်ကြတဲ့ Android နဲ့ security update တွေဆက်လက်အသုံးပြုလို့ရနေဦးမယ်လို့ Huawei ဘက်က သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Huawei ဟာ Y9 Series ကို မကြာခင်မိတ်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပြီး Mate 20 series ထဲက အရောင်အသစ်ဖြစ်တဲ့ Amber Sunrise ကိုလည်း မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
Source - straitstimes / forbes.com ( Tencent, Xiaomi And Oppo Testing Huawei's '60% Faster' Android OS, Report Claims )
အိမ်တစ်လုံးတည်းမှာဘဲ ညီအစ်ကို (၅)ယောက်လုံးနဲ့ ယူပြီး အတူနေတဲ့ အမျိုးသမီး
ဟာသသရုပ်ဆောင် ကစ်ကစ် ( အန်တီကစ် ) ကွယ်လွန်
မန္တလေးက လူဆိုးတွေကိုထိန်းသိမ်းမယ့် တာဝန်သိလူဆိုးထိန်းပြည်သူများ
ဒူဘိုင်းနိုင်ငံမှာသာ မြင်တွေ့ရနိုင်မယ့် ထူးဆန်းတဲ့အရာ (၁၁) ခု…။
( ၁၂ ) ပတ်အတွင်း ပေါင် ( ၄၀ ) ကျော် ကျအောင် ဘယ်လိုလုပ်ယူကြမလဲ
စိတ်ကောက်နေတဲ့ ချစ်သူကို ချော့နေတဲ့ Video လေးတင်လိုက်တဲ့ Chi Chi